Midowga Afrika ma ka guul gaarayaa xal u helidda muranka wabiga Nile? | Hangool News
Midowga Afrika ma ka guul gaarayaa xal u helidda muranka wabiga Nile?
July 21, 2020 - Written by Hangool News 1
Hangoolnews:- Ka dib markii xal lagu gaadhi waayey wada hadalladii u dambeeyey ee ay yeeshaan Itoobiya, Sudan iyo Masar, ayaa waxa maanta oo Salaasa ah la filayaa in ay hogaamiyeyaasha Afriki kulan maqal iyo muuqaal ah kaga wadaxaajoodaan biyo-xidheenka weyn ee Itoobiya ee la isku maandhaafay ee ay ka dhisayso webiga Niil.
shacabkeeda ee aan haatan helin korontada laakiin Masar oo webigaasi u yahay isha qudha ee ay biyo ka hesho ayaa wadnaha farta ku hayso iyada oo ka cabsi qabto biyo xireenkaasi inuu halis gelin doono biyaha Masar soo gaadha
Ku dhawaad muddo tobban sano ah oo uu dhisamaha biyo-xireenka socday ayaa waxaa hadda la buuxinaya biyo xireenka iyadoo lagu rajo weyn yahay in heshiis ay wada gaaran Itoobiya iyo dalalka Sudan iyo Masar.
Itoobiya waxay ku han weyntahay in awoodda tamarta ah ay biyo xireenkaas ka dhaliso sida ugu dhaqsiyaha badan, halka Masar iyo Sudan ay doonayaan in loo ballanqaado in biyaha webiga aysan yaraan doonin maadaamaa ay ku tirsanyihiin malaayiin beeraleey ah oo dalalkaasi ku nool.
Isbuuci aynu so dhaafnay, Wasiirka Biyaha, Waraabka iyo Tamarta ee dalka Itoobiya ayaa sheegay inaan si rasmi ah loo billaabin buuxinta biyo-xireenka.
Wasiirka biyaha Itoobiya Dr Sileshi Beqele oo u waramay telefishinka dowladda ee EBC wuxuu sheegay biyo buuxinta iyo biyo xireenka iyo dhismaha biyo xireenkaba sidi looga talagalay iney u socdaan balse weli aan si rasmi ah loo billaabin buuxinta biyaha biyo-xireenka.
Qoraalka sawirka,Sawir dhawaan dhinaca satellite looga qaaday biyo-xireenka
Sawir dhawaan dhinaca satellite looga qaaday biyo-xireenka ay Itoobiya dhiseyso ayaa muujinaya xaddiga biyaha biyo-xireenka oo kordhay.
Iyada oo la sheegay wasaaradda biyaha ee dalka Itoobiya iney xaqiijisay iney sawirradaasi sax yihiin.
Wadahadalladii hore ee u dhexeeyay seddexdan dal wax natiijo ah kama aysan soo bixin.
Hase ahaate, waanwaantan cusub ee uu horseedka ka yahay Midoowga Afrika ayaa waxay eegi doonan horumarka wadahadalka lagagaaray iyo in ururka u furanyahay waddo kale oo xal kama dambeys ah lagu helayo.
Marka biyo xireenka la dhameystiro waxaa uu dhalin karaa 6kun oo megawatt oo koronto ah kaas oo ka dhigi doono biyo xireenka ugu weyn ee tamarta laga dhaliyo qaaradan Afrika.